Saliida Naxaasta ah ee la Dhoobo oo la Buriyay
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW-Saliida Nadiifsan Maarta Nadiifta Fidsan Musqusha Musqusha
qiimeeyay 4.81 out of 5 ku salaysan 16 ratings macaamiisha
(16 dib u eegista macaamiisha)
Is-waafajinta Biyaha ee Fudud
Soo saarida qaab fudud, naqshadeysan, tubbada ayaa kuu oggolaaneysa inaad si fudud ula qabsato labadaba mugga biyaha iyo heerkulka labadiisa gacmeed.
Dariiqa Aerated ee Nadiifinta Maalin Kasta
Bixinta illaa 1.5 gallon daqiiqaddii, tubada qubayska musqusha waxay siisaa il biyo nadiif ah oo joogto ah, taas oo ka dhigeysa mid ku habboon nadaafadda maalin kasta. Sharafta dhaadheer ee dheereysa, iyadoo ku siineysa ku siidayn buuxda xagga hoose ee hoose.
2320300ORB tilmaamaha rakibaadda
Laga soo bilaabo 4 ilaa 16 inji qolka musqusha ballaaran 2320300ORB oo ku yaal 3-dalool, masaafada ayaa kusii dheereysa shuruudahaaga dhabta ah.
Raaxo yar-furaha ah oo dhammaystiran oo madow oo dhammeystiran, naqshad sare oo toosan oo qaas ah oo ku habboon abuurista qaabka qurxinta musqusha casriga ah iyo tan caadiga ah.
Waxay ku habboon tahay guri kiro, guri cusub, guri keliya, guri baabuur, trailer trailer iyo adeegsiga qoyska.
Gacmaha toosan ee naqshadaha ergonomics, cabir ku habboon oo ku habboon xakameyn, raaxo leh in la leexiyo.
Waxaad u isticmaali kartaa dadaal yar iyo hab fudud.
Qaabka Biyaha: Socodka
Muuqaalka Biyaha: Kulm kulul iyo qabow
Cadaadiska Biyaha: Ugu yar 0.5 bar, 1.0 bar lagu taliyay
Maqaarka guud ee jirka: Dhismaha Qalfoofka adag
Walxaha: Xirmooyinka Ceramic Disc Cartridge
Qalabka gacanta: Zinc-Alloy
Dhamaad: Naxaas Saliim ah oo Biyo Lagu Dhoobo
Nooca Rakibaadda: Deck Mounted
Tirada Goobaha loo baahan yahay: 3
Dhumucda Maxka Deck: 1.38 ″
Dhibco & biyo qabow dhibco waa lagaran karaa, waxaad kaheli kartaa gacanta si aad ugu tilmaamto jiho kasta oo aad ubaahantahay.
Aidarro Ka Saarid Gaar ah
Soo saare wax qabad sarreeya ayaa bixin kara qulqulka qulqulka, wuxuu badbaadin karaa wax ka badan 50% biyo.
Soosaaraha waa la arki karaa, si fudud ayaad u nadiifin kartaa ama u beddeli kartaa.
Si fudud ayaa loo xakameyn karaa mugga biyaha iyo heerkulka si sax ah.
Naqshadaynta 360-digrii wareeg ah oo loogu talagalay adeegsiga habboon.
Naqshad Degdeg ah oo Deg Deg Ah
Abuurista asalka ah ee isku xidhka dhakhsaha leh ee isku xidhka.
Way fududahay inaad ku rakibto naftaada bilaa tuubbo la'aan.
Xakameeyayaashu si adag ayey ugu xiran yihiin farsamada, daad ma laha.
Qalabka adag ee adag
Maaddada naxaasta ah ee adag waxay ka wanaagsan tahay bir kale
Looma baahna in laga walwalo miridhku, dhibaatooyinka dhibaatooyinka daxalka.
SKU: 2320300ORB Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: qasacad-qas, saddex god, Laba Gacmeed
Saliid Saliid ah
Waxaan ka yara yaabay inaan iibsado sheygan qiimaha aad u hooseeya awgiis. Marwalba waxaan ka iibsadaa qasabadaha noocan ah bakhaarada hagaajinta guriga oo waxaan bixiyay uguyaraan $ 300 + midkiiba. Ka dib markii aan ku rakibey midkaan musqusha gaar ahaaneed waxaan aad ula dhacay shaqadeeda. Dhammaan iskuxirayaashu waxay ahaayeen naxaas oo dhamaan goomayaasha sifiican ayaa loo sameeyay. Dhamaadka birta waxay umuuqataa sidoo kale in sifiican loo sameeyay. Rakibidda ayaa ahayd mid aad u fudud.
Waxaan dalbaday kuwan maxaa yeelay waxay la mid yihiin qaar ku yaal Home Depot iyo Lowe's nuska kharashka. Runtii waan jeclaaday sida ay u ekaadeen mar la rakibay.
Tan waxaa loogu adeegsaday qolka budada qurxinta. Aad ayaan u faraxsanahay, gaar ahaan qiimaha la bixiyay. Yimid ammaan ah baakad. Qaab wanaagsan, ku habboon oo dhammeeya. Tuubada lafteedu waxay dareemeysaa miisaan fudud oo qurux badan taas oo iga dhigtay inaan su'aal ka keeno tayada, laakiin si fiican ayey u shaqeysaa. Kuleylka / kuleylka qabow waxay si habsami leh u rogaan oo si sax ah u shaqeeyaan. Qalabka rakibaadda iyo isku xirnaanta degdegga ah ayaa ka dhigay rakibida neecaw. 100% ma hubo inaan tan u isticmaali lahaa adeeg culus, jawi dalbanaya laakiin ogaanshaha waxaan ogahay, mar labaad ayaan tan iibsan lahaa.
Dhamaad fiican oo umuuqda mid waara. Gacan-qabadyadu waxay dareemaan inay adag yihiin waxayna u egtahay meesha wax kasta oo qolka ku jira. Qiime wanaagsan, gaar ahaan baahsan. Nadiifi rakibida wax aan waxba tarayn oo cusub. Xusuusnow dheecaan soo baxa kor / hoos adoo riixaya joojiyaha oo ha ku riixin riix / jiido baarka. Waan jeclahay astaamahaas maxaa yeelay waxay haysaa muuqaal nadiif ah qasabadda.
Qiimaha qasabaddan, runtii waan ku faraxsanahay iibsigeena. Ninkaygu wuxuu dul saaray miiskayaga ka hor intaanan rakibin golaha wasiirada sidaa darteed rakibistu way fududahay. Waxay leedahay inbadan oo warshadeed ujeedo, laakiin waan jeclahay. Waxaa sidoo kale si taxaddar leh loo baakadeeyey oo aan jeclaa in aan ku hubiyo in aan waxba la xoqin.
Waxaan soo iibsaday labo ka mid ah kuwan qiimihiisuna waa weyn yahay. Tuubada waa mid adag oo si fiican loo dhisay. Xidhiidhyadu waa hagaagsanyihiin waligeyna dhib kuma qabin wax daadinta. Way fududahay in la rakibo, waxay umuuqataa mid fudud oo nadiif ah. Waan kula talin lahaa.
Aad ayaan ugu qanacsanahay qasabadani. Waxaan rabay inaan cusbooneysiiyo musqusha oo waxaan lahaa miisaaniyad yar. Waan jeclaa muuqaalka tan laakiin kuwa kale ee la barbardhigi karaa waxay ahaayeen $ 100 +. Ku soo iibsaday tan si ku saleysan dib-u-eegisyo kale oo wanaagsan oo aan ku faraxsanahay inaan sameeyay. Waxaan qorsheynayaa inaan iibsado mid kale oo aan ku hagaajiyo musqusha xigta!
Gebi ahaanba qasabado qasab ah. Super fududahay in la rakibo. Casri iyo qurux. Culus oo sifiican loo sameeyay sidoo kale. Mar labaad iibsan lahaayeen alaabtooda!
Waxaan la macaamilayay qasabad aan saamixi karin biyo ku filan dhex mara. Waxaan tan ugu iibsaday biiyaha wareega farqiguna waa mid la yaab leh. Waxay ahayd rakibid fudud waxayna umuuqataa mid cajiib ah iyo waliba inay aad u shaqeyneyso tii ugu qaalisaneyd ee aan badalay. Aad loogu taliyay!
Gabi ahaanba jacayl! Wax kasta oo sidan oo kale ah dukaanka wuxuu ahaa 150 $ ama ka badan mana uusan la imaanin bulaacada, tani waxay u muuqataa wax la yaab leh musqusha! Qiyaasta dinaar kasta
Qasabad fiican! Waxay la timid wax walba si loo rakibo, oo ay ku jiraan 1/2 ilaa 3/8 tuubooyin dhejis ah oo isku dhejisan oo ku saabsan 15 inji dheer. Markii ugu horeysay uma baahnin inaan aado dukaanka si aan qaybo badan uga helo!
Ma aanan xiiseyneynin inaan ku bixiyo boqol doolar qasabadda musqusha laakiin runtii waxaan doonayay mid fiican.
$ 80 midkan ayaa ka fiicnaaday sidii aan waligay filayay .. Waxay umuuqataa qaali, sifiican ayay u shaqaysaa, farxad ayaan qaatay fursada
Xalka dhaqaale ee musqusha, naqshadeynta casriga ah, gacan qabashada leverka iyo aalado aan lahayn ayaa soo baxa bullaacadda iyadoo aan lahayn usha jiidan.
Gabi ahaanba jecel qasabadahaan! Qiimaha noocan oo kale ah ee lacagta. Sidaas fududahay in la rakibo sidoo kale! Khalad kuma noqon karo kuwan.
Waan jeclahay muuqaalka qasabada, wax yar uun bay ila tahay. Si fudud loo rakibo kaliya waxaan jeclaan lahaa inay wax yar ka weynaato. Laakiin u qalantaa lacagta.
Tuubadaani waxay u egtahay wax lala yaabo musqusha. Xaqiiqdii ma dalban doonaa 2 dheeraad ah musqusha martida !!